ပင်လယ်ပျော်များ နှင့် မြန်မာ (၆) – C/E ဦးဝင်းအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပင်လယ်ပျော်များ နှင့် မြန်မာ (၆) – C/E ဦးဝင်းအောင်
ပင်လယ်ပျော်များ နှင့် မြန်မာ (၆) – C/E ဦးဝင်းအောင်
Posted by koyin sithu on Jan 31, 2013 in Copy/Paste | 20 comments
သဘောင်္သား၊ ပညာရေး၊ လေကျင့်ရေး၊ စာမေးပွဲ၊ လက်မှတ်၊ White List
သဘောင်္သည်..ရွေ့လျားသွားလာနေသော..ရေပေါ်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်..။ တန်ဘိုးအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းချီပြီးတန်ပါသည်..။ နောက်ဆုံးပေါ် ရေနံတင်သဘောင်္ကြီးများ.. ကွန်တိန်နာ တင် သဘောင်္ကြီးများ၏ တန်ဘိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ကျော်ပါသည်..။
သဘောင်္ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဆက်သွယ်ရေးစက်များ မှာ ခေတ်မီသကဲ့သို့ ရေကြောင်းလမ်း ညွှန် အထောက်အကူပြု အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများမှာ.လည်း..နည်းပညာ..အဆင်မြင့်ပါသည်..။
ကိုလွှမ်းမိုးကြီးဆိုခဲ့..သလို..သဘောင်္တက်တဲ့အခါ..သူလေကုန်းပတ်တိုက်ရတယ်.. ဆိုတဲ့.. စာသားက…မမှန်ပါ..။ အကြောင်းအရာတစ်ခု..Field တစ်ခုကို..ဂဃနဏ နားလည်ခြင်းမရှိသူ တစ်ဦး ၏ အဝေးမြင်..အမှန်း..အတွေး..ဖြစ်ပါသည်..။
ကုန်းပတ်တိုက်သည်ဆိုသည်မှာ..ရှေးအခါက..သဘောင်္၏ Main Deck ကို သစ်သားခင်းပါသည်..။ သစ်သားများကြားတွင်..အုန်းဆံကြိုးထည့်ပါသည်..။ ကုန်းပတ်ကိုလည်း..ပြောချောသန့်ရှင်းနေရန်..တိုက်ရပါသည်..။ ဒါက..တော်တော်ကြာလှပါပြီ..။ ကျွန်တော်တို့..မမွေးမီကာလ.ကဖြစ်မည်..။ ကိုလွှမ်းမိုးကြီး..အသံကောင်းပေမဲ့..ဗဟုသုတ..မကောင်းတာကိုတော့..ထားပါတော့..။
ကိုလွှမ်းမိုး..တို့ထက်..ငယ်သော..၊ခေတ်မီသည်ဟု..မိမိကိုယ်ကို..ထင်နေသော.၊.အနုပညာသမား..ဇတ်ညွှန်းဆရာ..အချို့ နှင့် ဒါရိုက်တာအချို့သည်..မဲပြာပုဆိုး..ဇတ်လမ်းထဲက..မထွက်နိုင်..ဗီလိန်ဆိုတာနှင့်.. သဘောင်္သား..ကို သတိရ..။ သင်္ဘောသားဆိုတဲ့ဇတ်ရုပ်..ကို..ပညာမဲ့..ပညာမတတ်..ဟု..ဖော်ညွှန်းချင်သလိုလို..။ သူတို့၏တင်ပြချက်များကို..ဖတ်မိတိုင်း..ကြည့်မိတိုင်း..၊ ကိုယ်တိုင်က..ဗဟုသုတအားနည်းခေါင်းပါးပြီး .သူများကို..ဆရာလုပ်ချင်..တင်ပြချင်သည့်.ခပ်ညံ့ညံ့.စိတ်ဓါတ် ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်.. အနုပညာ သမားမျိုး..မို့..သနားပြီး..ပြုံးမိတတ်သည်..။
သဘောင်္ရေကြောင်းလမ်းညွှန်အလုပ်လည်း..မလုပ်ခိုင်းပါ..။ သဘောင်္စက်ခန်းထဲမှာ.အင်ဂျင်နီယာလည်း မလုပ်ခိုင်းပါ..။ အနှီပုဂ္ဂိုလ်..ကို..
သဘောင်္စက်ခန်းက..၅ထပ်..၆ထပ်..ထိ..ရှိပါသည်..။ သဘောင်္တစ်စီးလုံး အမြင့်က..ဆယ်ထပ်..ဆယ့်နှစ်ထပ်..တိုက်တစ်လုံးလောက်..အမြင့်ရှိသည်..။သဘောင်္မောင်းသည့်..ပင်မစက်ကြီး..Main Engine က..ပင်လျှင်..၃ထပ်တိုက်..တစ်လုံးခန့်မြင့်ပါသည်..။ ပင်မစက်ကြီးများ၏ မြင်းကောင်ရေမှာ သောင်းနှင့်ချီပြီးရှိပါသည်..။ ယနေ့နောက်ဆုံးပေါ်..အကြီးဆုံးအင်ဂျင်၏ မြင်းကောင်ရေမှာ..တစ်သိန်း ကျော်ပါသည်..။
စက်ကို..ထိန်းချုပ်သည်မှာ..Automation Control ဖြစ်ပါသည်..။ လေအားအသုံးပြု Pneumatic Control, အရည်အားအသုံးပြု Hydraulic Control, ပရိုဂရမ်အသုံးပြု Programmable Logic Control (PLC control), အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာအသုံးပြု.Micro Controller..စသည့် စသည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို..အသုံးပြုပြီး..စက်များကို ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ရပါသည်..။
ဆိုလိုချင်သည်မှာ..သဘောင်္သားများ..သဘောင်္အရာရှိများ..သည်..အဆင့်မြင့်နည်း..ပညာများကို..အသုံးပြုပြီး..လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြသည့်ခေတ်ရောက်နေသည် မြန်မာပြည်တွင်း ထက်စောသည်….။ စာမတတ်လျှင်စာဖတ်ကြပါဦး..ဟု. သေးနုတ်သော..အမြင်ရှိသည့်..အနုပညာသမားအချို့ကို..မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါသည်..အင်တာနက်တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာလျှင်ပင်..သိနိုင်ပါသည်..။
(မှတ်ချက်..။ အနုပညာသမားအားလုံးကို..ပြောချင်းမဟုတ်ပါ.၊ စစ်မှန်သော..အနုပညာသမားများ ကို..အစဉ်..လေးစားပါသည်…။)
ကျွန်တော့်ကို..ဒီလူ..အဲဒီဒါရိုက်တာတွေ..စာရေးသူတွေကို..တော်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ်နဲ့..တူတယ်..ဟု..ထင်နိုင်ပါသည်..။ ကျွန်တော်စိတ်မဆိုး..ပါ..။ စိတ်မကောင်းတော့..ဖြစ်ရပါသည်..။
သူတို့၏..နှစ်ရှည်လများ..၊ မဲပြာပုဆိုး..ဇတ်လမ်းအစုတ်..အပြတ်..များဖြင့်..တင်ဆက်..ခဲ့မှုကြောင့်..၊ ရေကြောင်းလောကထဲ..သို့..၀င်ရောက်လာသော..လူငယ်အချို့..တွင်..အထက်က..ဖော်ပြခဲ့သော..ခပ်ညံ့ညံ့..အတွေးများ..ပါလာပါသည်..။ အဆိုးဆုံးကတော့..စာသိပ်..မတတ်လည်း..ရသည်..ဆိုသည့်..အတွေး..ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်..။
အဆိုပါစိတ်ဓါတ်မျိုးရှိသော..လူငယ်အချို့သည်..၊ကုန်းပတ်ဘက်တွင်ဖြစ်စေ၊ စက်ခန်းဘက်တွင် ဖြစ်စေ.. အလုပ်လုပ်ရာတွင်..လေ့လာလိုစိတ်.၊ စူးစမ်းလိုစိတ်၊ မှတ်သားလိုစိတ်၊ နည်းပါး..ပါသည်..။ အားစိုက်ထုတ်မှုလည်း..၊၀ီရိယ၊ ဇွဲ..နည်းပါသည်..။
စာမတတ်ဘဲ..၊ အခြေခံမကောင်းဘဲ.၊ အလုပ်ခွင်တွင်..လေ့လာမှုမရှိခဲဘဲ.စာမေးပွဲအောင်ခြင်ပါသည်..။
လေ့လာခြင်းမရှိဘဲ..၊အရည်အချင်းပြည့်ဝခြင်းမရှိဘဲ..၊ သူအရင်.နေခဲ့သည့်…ကျောင်းများ..တွင် အောင်ခဲ့သလို…လွယ်လွယ်နှင့် အအောင်ပေးဘို့..တောင်းဆိုလာပါသည်..။
သိထားဘို့လိုသည်က..ကျွန်တော်တို့..ရေကြောင်းလောကမှ..လက်မှတ်များမှာ..ဘွဲ..ဒီဂရီ..ဒစ်ပလိုမာ..မဟုတ်ပါ..။ မည်သည့်အဆင့်..၊ မည်သည့်..အတန်းအထိ..စာပေသင်ကြားခဲ့သည်..။ပြီးဆုံးအောင်မြင် ခဲ့သည်..ဆိုသည့်..လက်မှတ်မျိုးမဟုတ်ပါ..။
COC (Certificate of Competency)ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ဖြစ်ပါသည်..။ မကျွမ်းကျင်ဟု..သတ်မှတ်ခံရလျှင်..လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ..။
ကျွန်တော်တို့..Engineer ဘက်တွင်..ရေးဖြေအောင်မှတ်မှာ (၅၀%)၊ နှုတ်ဖြေအောင်မှတ်မှာ (၉၀%) ဖြစ်ပါသည်..။ (၉) ပုဒ်မေးသည်ထဲမှ.(၆) ပုဒ်ရွေးချယ်..ဖြေဆိုနိုင်သည်..။
သို့သော်..(၆) ပုဒ်လုံးမှာ..ဘဲဥတော့ကွဲရမည်..။ အနည်းဆုံးတစ်မှတ်တော့..ရရမည်..။ ဘဲဥကွဲအောင်မဖြေနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှတ်ထားခဲ့ခြင်းသည်..အဆိုပါမေးခွန်းတွင်မေးထားသော အကြောင်းအရာသည် ဥပမာ Steering Gear အကြောင်းဖြစ်သည်ဆိုပါက..စာဖြေသူသည်..Steering Gear နှင့်ပါတ်သက်လျှင် Knowledge Level –0ဖြစ်သည်..။ သည်သို့ဆိုလျှင်..Watch Keeping Engineer ဖြစ်ထိုက်ပါသလား..။ သည်သို့ ယူဆပါသည်..။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံထည်း..ထူးဆန်းတီထွင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ..။ ကမ္ဘာ့ရေကြောင်းလောကတစ်ခုလုံး သည် ..ကမ္ဘာ့ရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် (IMO) မှအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများစုပေါင်းသဘောတူရေးဆွဲထားသည့် နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်..(STCW: The International Conventions of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) ပါ..သတ်မှတ်ချက်များကို.. လိုက်နာ ရပါသည်..။ လိုက်နာခြင်းရှိမရှိကိုလည်း..International Audit အဖွဲ့များမှ..လာရောက် စစ်ဆေး ပါသည်..။
ငါ့အရပ်နဲ့..ငါ့ဇတ်..ငါကချင်သလို..ကမယ်..လုပ်လို့မရပါ.။ သည် Audit အကြောင်းကို..
International Audit မှာ.(၂) ပိုင်းရှိပါသည်..။
(၁) IMO Audit ဖြစ်ပါသည်..။
(၂) Flag State (Administration ) Audit ဖြစ်ပါသည်..။
Audit အကြောင်းမသွားခင်..COC နှင့် Flag State ဆက်စပ်မှုလေး..ပြောပြချင်ပါသည်..။ .သည်စာစုသည် လူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်သဖြင့်..လူငယ်များကို..သိစေချင်ပါသည်..။
ငါတို့..လျှောက်နေတဲ့..လမ်းက..ဘာလမ်းလဲ..ဆိုတာ..မီးခွက်လေးထွန်းပြချင်ပါသည်..။ ချော်လဲတာမျိုး..နည်းစေလိုသော..စေတနာ..သာပါပါသည်..။ ဆရာလုပ်သည်ဟု..မမြင်စေလို..။
မြန်မာသဘောင်္သားတစ်ယောက်..Singapore Flag (စကာင်္ပူတွင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး၊ စကာင်္ပူ အလံလွှင့်ထူထားသော သဘောင်္) သဘောင်္တစင်းပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်မည်ဆိုလျှင် စကာင်္ပူ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာဌာနဖြစ်သည့် (MPA) မှ ထုတ်ပေးထားသည့် CoC ရှိရပါမည်.။ မရှိလျှင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်မရှိပါ..။ အလုပ်မခန့်ပါ..။
ဥပမာ..CE တစ်ယောက်ဆိုပါတော့..။ သူက..မြန်မာ CE , CoC ကိုင်ထားသည်..။ စကာင်္ပူလက်မှတ်မရှိ..။ သူက..စင်္ကာပူသဘောင်္မှာ..အလုပ်လျှောက်သည်..။ ကုမ္ပဏီကလည်း..သူ့ကို သဘောကျသည်..ခန့်ချင်သည်..။
သူ့လျှောက်လွှာမှာပါသော..မြန်မာ CE , CoC သည် အစစ်ဟုတ်မဟုတ်.. စကာင်္ပူ MPA မှ မြန်မာ DMA ကို Fax (or) Email ဖြင့်လှမ်းမေးသည်.။
DMA မှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက..စစ်ဆေးပြိး..လက်မှတ်အမှန်ဆိုပါက..၊မှန်ကန်ကြောင်း၊ လက်မှတ်အတုဆိုပါက..အတုဖြစ်ကြောင်း..အကြောင်းပြန်ကြားပေးရသည်..။
မြန်မာနိုင်ငံမှ..လက်မှတ်အစစ်ဖြစ်ကြောင်း..ပြန်ကြားခဲ့လျှင်..၊ လက်မှတ်ကလည်း..အစစ်ဖြစ်သည်..။ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း..White List အတွင်းပါနေသဖြင့်..၊ စကာင်္ပူ MPA မှ အဆင့်တူ..CE လက်မှတ် CoE ထုတ်ပေးလိုက်သည်..။
အဆိုပါ..မြန်မာ CE သည် စင်္ကာပူသဘောင်္တွင်..တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းသည်..ဥပဒေနှင့် အညီဖြစ် သွားသည်..။တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်လည်း..ရသွားသည်..။
မြန်မာနိုင်ငံက.(၁).White List ထဲမပါလျှင်..သို့တည်းမဟုတ်.. (၂)လက်မှတ်က..အတုဖြစ်နေလျှင်.. Singapore MPA မှ လက်မှတ်လည်းထုတ်မပေး..တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်လည်းရမည်..မဟုတ်..။
IMO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြသည်..။
သင်္ဘောတစ်စီးပေါ်တွင် ရာထူး အဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံ…
IMO အဖွဲ့ဝင်..နိုင်ငံအချို့သည်..လုပ်ငန်းအဆင်ပြေစေရန်၊ ကုမ္ပဏီနှင့် သဘောင်္သားအတွက်.. မနစ်နာ စေရန်.. လက်မှတ်မှန်ကန်မှုရှိမရှိ..စစ်ဆေး နေစဉ်ကာလအတွင်း..(၃)လ..သက်တန်းရှိ..ယာယီ လက်မှတ် ထုတ်ပေး တတ်ပါသည်..။ အဆိုပါ..သဘောထားကြီးစွာ..လူကြီးလူကောင်းဆန်စွာ..ပေးထားသော..အချက်ကို..သိသော လက်မှတ်တုသမားများနှင့်..အေးဂျင့်အချို့က..အဆိုပါနိုင်ငံများတွင်..အလုပ်လျှောက်ပါသည်..။ လက်မှတ်တုဖြစ်ကြောင်း..သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ Marine Department မှ..စာမရမခြင်း..လုပ်စားလို့ ရပါသည်..။ တစ်လလျှင် ၇၀၀ သာရမည့်..Oiler က..CE အဖြစ် တစ်လ..၇၀၀၀ ဒေါ်လာရပြီး..(၃) လ..လုပ်ခွင့်ရနိုင်သည်..။
.မြန်မာနိုင်ငံရပ်တည်နေပါသည်..။ အချို့ နိုင်ငံများမှ..မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သည်ကိစ္စကို..စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်သင့်ကြောင်း.. တောင်းဆိုမည်ဟုပင်..ကြားသိ..နေရပါသည်..။
မြန်မာတစ်ယောက်ခန့်လိုက်.၂လ…၃လနေရင်..လက်မှတ်အတုမှန်းသိလို့..လူလဲလိုက်ရနှင့်..လုပ်ငန်းတွင်များစွာ..အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြရပါသည်..။ အဆိုပါ အနေအထား ထက်ဆိုးသောပြသနာ တစ်ခုနှင့် လည်း. အခြားနိုင်ငံများ နှင့် သဘောင်္လုပ်ငန်းငန်းရှင်များ..ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်..။
၄င်းမှာ..Port State Control မှ..တက်ရောက်စစ်ဆေးရာတွင်.မြန်မာ.အရာရှိလက်မှတ်တု. ကိုင် ဆောင်သူ များနေသဖြင့်..၊ သဘောင်္၏အနည်းဆုံးလိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူ အရေအတွက်..မပြည့်သဖြင့်..(Minimum Safe Manning) ၊ သဘောင်္သည်. ပင်လယ်ပြင်ထွက်ခွာ ရန် Safety မရှိတော့.သဖြင့်..၊သဘောင်္အားဖမ်းထားလိုက်ရခြင်း မျိုးဖြစ်ပါသည်..။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်၏ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ်.. မြန်မာလက်မှတ်..မြန်မာလူမျိုးကို..ခန့်ရန်စဉ်းစားနေကြသည်အထိ..နိုင်ငံအချို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေ ရာ..အလုပ်အကိုင်ရှားပါးလာစေမှု၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခုထဲတွင်..ပါဝင်လာပါသည်..။
(၁) IMO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွင်း..သဘောင်္သားနှင့် သဘောင်္အရာရှိများ..လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးခြင်းကို အပြန်အလှန် စစ်ဆေးခွင့်ပေးထားပါသည်..။
မလေးရှား၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျာမဏီတို့မှ..မြန်မာ နိုင်ငံ၏စနစ်ကို..လာစစ်ဆေးခဲ့ဘူးသည်ဟု..သိရပါသည်..။ ၂၀၁၂ အတွင်း EU မှ လာရောက်စစ်ဆေး ခဲ့ပါသည်..။ အဆိုပါစစ်ဆေးမှုရလာဒ်များ..ကောင်းမွန်သော်လည်း..စင်းလုံးချောမဟုတ်ပါ..၊ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရမည့်..လုပ်ငန်းစဉ်များရှိပါသေးသည်..။
အဆိုပါ..အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက လာရောက်စစ်ဆေးပြီး..ကြေနပ်မှုရှိလျှင်..မြန်မာလက်မှတ် (COC ) ကို သူတို့နိုင်ငံမှ ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုပြီး..သူတို့နိုင်ငံမှ သဘောင်္များပေါ်တွင် ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်..။ လိုအပ်ချက်ရှိသည်ဟုထင်မြင်လျှင်တော့..ငြင်းပယ်မည်ဖြစ်ပါသည်..။ စစ်ဆေးသောနှစ် အကန့်အသတ်မရှိပါ..။ တနှစ်တစ်ခါလာစစ်သည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်..။ သူ့နိုင်၏ ဘတ်ဂျက်နှင့် ပေါ်လစီပေါ်တွင်လည်းမူတည်မည်..။ ကျွန်တော်တို့..မြန်မာများ၏ ကောင်းသတင်း..ဆိုးသတင်း ပေါ် တွင်လည်းမူတည်မည်ဖြစ်သည်..။
(၂) IMO ၏စစ်ဆေးမှုမှာ..လွတ်လပ်သော..ပညာရှင်အဖွဲ့မှ..လာရောက်စစ်ဆေးပြီး..IMO ကို ..အစီရင်ခံစာ တင်ပါသည်..။ IMO အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည့် အစည်းအဝေးကြီးတွင် အဆိုပါ..အစီရင်ခံစာကို..သုံးသပ်ပြီး..White List တွင်ပါခြင်း မပါခြင်းရလာဒ်ကို သိရှိရမည်.ဖြစ်ပါမည်.။ Black List ဟုမရှိပါ..။ အဆိုပါစစ်ဆေးမှုသည်..(၅) နှစ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါသည်..။ White List သက်တန်းမှာ..၅ နှစ်သာရှိပါသည်..။
White List တွင်မပါလျှင် မြန်မာလက်မှတ်များကို..IMO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အသိအမှတ်မပြုပါ..။
White List တွင်ပါသော နိုင်ငံများမှ ထုတ်ပေးထားသည့် သဘောင်္သားများ၊ သဘောင်္အရာရှိများ၏ လက်မှတ်ကို.သာ..ကျန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ..အသိအမှတ်ပြုပါသည်..။ အဆင့်တူလက်မှတ်ထုတ်ပေး ပါသည်..။
White List သည် အရေးကြီးပါသည်..။
ယခင်က..ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ..လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု ကိုပြုသည်မှာ..နိုင်ငံပိုင်ကျောင်းများသာ ရှိသည်..။
သို့ရာတွင်.. DMA၏ Internal Audit ကိုသာမက..IMO နှင့် အခြား Flag State (Administration) များ၏ External Audit ကိုပါ..ခံယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း..၊ သင်ကြားမှု၊ အဖြေလွှာ၊ ဆရာဦးရေ၊ ဆရာအရည်အချင်းက..အစ..အစစ်ဆေးခံရမည်ဖြစ်သည့်အတွက်..၊တန်း..သိပ်လျှော့လို့.. မရပါ..။
အဆင့်မမှီလို့..White List ထဲမပါလျှင်..သဘောင်္လိုက်လို့မရဖြစ်သွားနိုင်သည်..ဘာလုပ်ကြမည်နည်း..။
စနစ်သစ်ပြောင်းလိုက်သည့်အတွက်..Flag State များမှ..Audit များ..သည်နှစ်နှင့်လာမည့်နှစ်မှာ လာနိုင်သည်..။ ငါးနှစ်ပြည့်မှ..လာမည်ဟု..စာချုပ်ထားသည်မဟုတ်..။
အတုလေးတွေ..လုပ်စားတာ..လုပ်စားပါစေ..။ သူ့ကံနဲ့သူ..လုပ်နေကြတာ..ဟု..ဆိုသော..လူကြီးများ လည်း..စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါသည်..။
ရေကြောင်းဌာနတစ်ခုထည်း..လုပ်နိုင်သည့်ကိစ္စမဟုတ်..၊ နိုင်ငံတော်အဆင့်က..လုပ်မှ..ပြီးမည့်ကိစ္စဖြစ် သည်..ဟုထင်သည်..။
B.Sc, A.G.T.I, H.G.P, MIMarEST (UK)
Chief Engineer Officer (MOT)
Cert. of International Maritime Conventions & Ship Safety Inspection (MLIT) (Japan).
လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့ သင်္ဘောသားလောကနဲ့ အလှမ်းဝေးနေသော
ရွာသူားများ ဗဟုသုတရစေဖို့ စက်ချုပ်ရေးထားတဲ့စာကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးပါတယ်ခင်ည..
အရောင့်ရင့်မှတ်တမ်းက မြန်မာသင်္ဘောသားများ White list ၀င်ချင်း
မ၀င်ချင်းအကျိုးဆက်များလဲ ပါသမို့… ရွာထဲ လည်ပတ်နေကျသော
ဗဟုသုတအနေနဲ့ပေါ့နော်…။ ။ အူးစည် ရာထူးတော့ ပြောတော့ဘူးနော်..
ဦးကျောက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက မြေအောက်မှာပါ…
ဒါပေမယ့် အဖေ သင်္ဘောသားမို့ နဲနဲပွါးပါရစေ…
ဖခင်ကြီးက CDC နံပတ် လေးလုံး (အတော်စောစော) နဲ့ပါခင်ဗျာ…
ဦးကျောက်တို့ငယ်စဉ် မဆလခေတ်မှာ သင်္ဘောသား အလုပ်က အတော်ခေတ်စားပါတယ်…
ဖခင်တာဝန်ကျေချင်သူမို့ ဖခင်ကြီး ဝန်ထမ်းဘဝကထွက်ပြီး သင်္ဘောလိုက်တော့….
ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်တော့ အတော်ခံရသဗျာ့…
မနာလိုတာ အမနာပပြောတာ အကဲစမ်းတာ တော်တော်ကြုံရသဗျာ….
အဲသည် လွှမ်းမိုးရဲ့ သီချင်းကိုတော့ ရင်ထဲမှာအနာတရဖြစ်အောင် မုန်းမိပါရဲ့…
ဟုတ်ကဲ့ပါ.. သင်္ဘောသီးမျိုးဆက် အူးလေး ကျောက်ခဲ အဖေ စီဒီစီလေးလုံးဆိုတော့ စီနီယာကြီးပေါ့နော်..
အများအားဖြင့် အိမ်နဲ့ဝေးနေသူတွေဆိုတော့ အိမ်ထောင်ဦးစီးမရှိတဲ့
မိသားစုကို အကဲစမ်းချင်ကြတဲ့… ဘားမန်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို
ပြောင်းသင့်နေပါပီ..။ မဟုတ်ရင် သဂျီးဆိုတဲ့ ကျိန်စာတွေထဲ ၀င်တော့မှာဘာ..
သင်္ဘောသီးမျိုးဆက်ကလာပြီး မြေအောက်မှာ စိန်ကောက်နေတဲ့
အူးကျောက် စိန်တောက်တမ်း HK မှာ ထိပ်နေရပါစေ… ဟီးး
ဒီလိုပိုစ့်မျိုးတွေ မျှော်နေတာ အတော်လေးကြာပြီ ဒီရွာကိုစရောက်ကတည်းကပါပဲ။ အခုတော့ ကျမဖတ်ချင် သိချင်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေထဲက တစ်ချို့ကိုသိရတော့ မျှော်ရကျိုးနပ်လာပြီပေါ့။ C/E ဦးဝင်းအောင်ကိုရော ကိုရင်စည်သူကိုရော ကျေးဇူးအထူးပါရှင်။
အပူမကန်ဘဲ ရင်အေးအောင်ဘာ ..
အသားဖြူ လူဆိုးရယ် တွေ့မိတော့
ကိုရင်ကြီး ကိုလဲ သတိရမိတယ်
အစ်ကိုကြီးနိုဇိုရေ.. ကြာဦးမယ်ဗျ.. ခုတော့ ၇လကျော်သွားပီ..
ကန်ထရိုက်က တစ်နှစ်ဆိုတော့.. အောင့်ထား.. အောင့်ထားရတယ်…
သိုင်းသမားနဲ့ အသားဖြူလူဆိုးတွေက ဘူတွေတုန်းဗျ..
အဆတ်ပြတ်နေတာကြာတော့… ဘီးတပ်ပြီးလိုက်မှ ရတော့မယ်ထင်ပါ့…
စကားမစပ်… အစ်ကိုကြီး ယောက်ခမကြီးကော ကျန်းမာရဲ့လားဗျ…
ယောက်ခမရိုသေတဲ့ အစ်ကိုကြီးလဲ ကျန်းမာပါစေနော့…
ပေါက်ဖော် နဲ့ ကိုချော ကြီးပါ ဗျ
သူတို့ ကိုတွေ့တော့ ၈ မိုင် မှာ ထိုင်ဖြစ်တာလေး သွားသတိရလို့ပါ
နေကောင်းကြပါတယ် ခင်ဗျ ၊ ကျေးဇူးပါ
သိုင်းသမား လူဆိုးနဲ့ အသားဖြူ လူဆိုးက
မိုက်ခဲပြီး ဟဲ ဖို့
အဲဒီ C/E ကျောင်းဆရာ ဦးဝင်းအောင်
ရေးသွားတာတွေကို ထောက်ခံပါတယ် ။
အရည်အချင်း မပြည့်ဝတဲ့ စာမေးပွဲဖြေသူတွေကို ၊
လုံးဝ ( လုံးဝ ) အအောင် မပေးသင့်ပါဘူး ။
လူသတ် လက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးနေသလို ဖြစ်နေမှာပေါ့ ။
အရည်အချင်း မပြည့်ဝတဲ့ သင်္ဘောသားတွေ များလာရင် ၊
မြန်မာ သင်္ဘော Industry ရဲ့ Image နှင့် Feed Back ပျက်စီးပြီး ၊
နောက်ဆုံးမှာ White List ကပါ ပြုတ်သွားလိမ့်မယ် ။
သူတို့ Engine ဘက်တော့ မသိဘူး ၊ အဘတို့ Deck ဘက်မှာတော့ ၊
တချို့ ရေးဖြေ ဘာသာတွေက အမှတ် ၈၀ ရမှ အောင်တာပါ ။
ဟိုးအရင် အဘတို့ စာမေးပွဲဖြေခဲ့တဲ့ ခေတ်တွေတုန်းက ၊
Exam Result အောင်စာရင်း ကြေငြာတဲ့ပုံစံက ရေလည် လန်းတယ် ။
လူ ၁၀၀ လောက်ဝင်ဖြေတဲ့ စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း က ၊
စာကြောင် တစ်ကြောင်းတည်းပဲ ပါတယ် ။
” ယခု တစ်ခေါက် ၊ အောင်မြင်သူ မရှိပါ ” တဲ့ ။
ပြီးရော ။ ရှင်းရော ပဲ ။
အောင်စာရင်း လာကြည့်တဲ့သူလဲ ၊ မျက်စိညောင်း သက်သာတယ် ။
စာရိုက်ရတဲ့ စာရေးမ လဲ လက်ညောင်း သက်သာတယ် ။
စာရွက် ဖိုး ၊ မှင် ဖိုး လဲ မကုန်တော့ဘူး ။ အေးရော ။
အဘ သူငယ်ချင်း ကပ္ပတိန် တစ်ယောက်ဆို ၊
သူ အောင်တယ် ဆိုတဲ့ ကပ္ပတိန် အောင်စာရင်း ကိုလည်းတွေ့ရော ၊
မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာပြီး ၊
အဲဒီ အောင်စာရင်း ရှေ့မှာထင် ဝမ်းသာလွန်းလို့ ခြုံးပွဲချ ငိုတာ ။
အဲဒီ အချိန်မှာ သူ့ အသက်က ၅၀ ကျော်နေပြီ ၊
အသားညိုညို ၊ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ၊
ရုပ်ကြမ်းကြီးနှင့် ဘယ်လိုမှ ကြည့်မကောင်းလို့ ၊
မနဲ ချော့ခေါ်ခဲ့ရတယ် ။
ဟုတ်တယ်လေ ၊ သူ့ခမျာ အဲဒီ စာမေးပွဲ အောင်ဖို့ ၊
၃ နှစ်လောက် နေ့မအား ညမအား စာကြည့်ခဲ့ရတာ ။
အဲဒီ ၃ နှစ်စာ စားရိတ် အတွက့် ၊ သူ့မှာရှိတဲ့ ၊
အိမ် တွေ ၊ ကား တွေ ပါ အကုန် ပြုတ်သွားပြီး ၊
ယောက္ခမအိမ် မှာ ကပ်စားနေရပြီ ။
အူးလေးစီ ပို့စ်ကြောင့် ပင်လယ်ပျော်တွေ ဘ၀ကို နားလည်လေးစားသွားမိပါတယ် ကြိုးစားထား အူးလေး ဖိုက်တင်းးးးးးးးး (5 ယောက်ဆိုလား :mrgreen:)
ကိုစည်သူရေ အခုက သင်္ဘောသားလူသစ် စီဒီစီ တွေ ဗုံးဘောလအော ချပေးလိုက်တော့ ရပ်ကွက်ထဲက ၁၀တန်းအောင်ပြီးသား ချာတိတ်တွေခမျာ မသိနားမလည်ပဲ စီဒီစီတွေလျှောက်ကြ အဲကျလာတော့ ဘယ်လိုင်း ဘယ်ကုမ္ပဏီကို အဖေခေါ်ရမှန်းမသိ ကုမ္ပဏီတွေမှာလဲ Volunteer တွေဆိုတာ အပြည့် Volunteer လုပ်ပေးရုံတင်မက ရိုက်ကြေးကလဲ သိန်း အစိတ်ပတ်ချာလည် ဆိုတော့ ဈေးကွက်က သင်္ဘောသားတွေဘက်ကနာစရာကြီးပဲ ။ အဲဒီရိုက်ကြေးပေးပြီးတက်သွားလို့ အပေါ်မှာ ပြသနာဖြစ်ပြန်ဆင်း
လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုးတောင်ပြန်လျော်ရ ။ အဲပြသနာမဖြစ်တော့လဲ လစာမရတဲ့သင်္ဘောမျိုးနဲ့ကြုံရင်ဖာဖြစ်ပြန်။ နောက်ဆုံးတော့ ကုမ္ပဏီတွေကချမ်းသာ ship owner နဲ့ချိန်ပေးတဲ့ ဟိုဘက်နိုင်ငံက Agency က လစာထဲက ဖြတ်ကျိတ် အော် နောက်ဆုံးကုန်းပေါ်ရောက်လာတော့ ရှာလာသမျှပိုက်ဆံက ပရုတ်လုံးလို လုံးပါးပါး ပြီးကုန်။
အဲစုမိဆောင်းမိဖြစ်လို့ စာမေးပွဲလေးဖြေမယ်ကြံ သိန်း ၇၀ ဆယ်လောက်က လျှောကနဲထွက်သွား ။
စာမေးပွဲကျရင် ကုန် အောင်ပြန်ရင်လဲ New C.O.C ခေါ်တဲ့လိုင်းကခပ်ရှားရှား ဆိုတော့
သင်္ဘောသားဘဝဆိုတာ တော်တော်စုနိုင်ဆောင်းနိုင် ခြိုးခြံချွေတာနိုင်မှ တော်ကာကျတာ။
တစ်ချို့ရှိသေးတယ် ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူစုဆောင်းထားပြီးရှာထားသမျှ ပြန်လာတော့ မိန်းမက နောက်ယောက်ျားအဆင်သင့်ယူဖို့အတွက်ဖြစ်သွားပါလေရော သြော် …ကျွတ်စ်…ကျွတ်စ်….
” ကိုစည်သူရေ အခုက သင်္ဘောသားလူသစ် စီဒီစီ တွေ ဗုံးဘောလအော ချပေးလိုက်တော့ ရပ်ကွက်ထဲက ၁၀တန်းအောင်ပြီးသား ချာတိတ်တွေခမျာ မသိနားမလည်ပဲ စီဒီစီတွေလျှောက်ကြ အဲကျလာတော့ ဘယ်လိုင်း ဘယ်ကုမ္ပဏီကို အဖေခေါ်ရမှန်းမသိ ကုမ္ပဏီတွေမှာလဲ Volunteer တွေဆိုတာ အပြည့် Volunteer လုပ်ပေးရုံတင်မက ရိုက်ကြေးကလဲ သိန်း အစိတ်ပတ်ချာလည် ဆိုတော့ ဈေးကွက်က သင်္ဘောသားတွေဘက်ကနာစရာကြီးပဲ ။ ”
သိပ်မှန်တာပေါ့ စိတ်ဓာတ်ပါရိုက်ချိုးခံရသလိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အဲဒီလို ပေါပေါများများ ချပေးလိုက်တာကြောင့် ရေကြောင်းတက္ကသိုလ် နဲ့ ရေကျောင်းသိပ္ပံကဆင်းတဲ့လူတွေက ၁၀တန်းမှာကတည်းကစပြီး အမှတ်ကောင်းရဖို့ အပင်ပမ်းခံကြိုးစားလာခဲ့တာ ကျောင်းပြီးတဲ့အထိဆိုတော့ ၆နှစ်လောက်ပေါ့။ အဲဒီလို အချိန်တွေ ငွေတွေအကုန်ခံပေမယ့် တစ်ချို့ကိုယ့်နောက်မှ ၁၀တန်းကို ရိုးရိုးအောင်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်ထက်အရင် သင်္ဘောတက် ၀င်ငွေတွေရ လုပ်သက်တွေရ။ ဆိုတော့ကာ ငါတို့ဒီကျောင်းတက်မိတာ အချိန်ဖြုန်း ငွေဖြုန်း လူပင်ပမ်းတယ် ဆိုတဲ့အတွေး ၀င်လာကြတယ်။ နောက်ပြီး အများအားဖြင့် သင်္ဘောသားဆိုတာနဲ့ အားလုံး တပြေးညီပဲ ပြေးမြင်ကြတာများမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ငါတို့ကျောင်းဆင်းတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်တယ်လို့ တွေးကြတယ်။ ဒါဆို ဘာလို့ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ် ရေကြောင်းသိပ္ပံဆိုတာတွေကို ထားနေလဲပေါ့။ တာဝန်ရှိသူသက်ဆိုင်သူတွေဘက်က ဘယ်လိုစိတ်ကူး ဘယ်လိုအစီအစဉ်နဲ့ အဲဒီလိုလုပ်သလဲဆိုတာတော့ မသိဘူးပေါ့လေ။
အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ.. ဂျီးဒေါ်စံပါယ်ရဲ့ ကျောင်းဆင်းတွေနဲ့
အပြင်က ရိုက်ထုတ်တဲ့ သင်္ဘောသားတွေနဲ့ ကွာတဲ့အချက်တွေ
ရှိပါတယ်… ကမ်ပဏီကို အလုပ်လျှောက်တာချင်းအတူတူ
ကျောင်းဆင်းတွေကို ပိုပီး ဖေဘာပေးပါတယ်… ရေကြောင်း
တက္ကသိုလ်ဆို ပိုတောင်ပေးသေး။ နောက်မှ အကျယ်လေး
ရေးပေးပါ့မယ်.. ခုတော့ အလုပ်များနေလို့နော့..
နောက်မှ အကျယ်လေးရေးပေးမယ်ဆိုလို့ ဖတ်ဖို့စောင့်နေပါမယ်နော.. ဆက်ဆက်တော့ ရေးပေးပါနော..။ အဲဒါလေ..
ကျွန်တော်တို.လို. သင်္ဘောနဲ. အလှမ်းဝေးလှတဲ့ သူတွေအတွက် ကိုရင့်ပို.စ်လေးက အသုံးဝင်သဗျာ..
ရာထူးတွေလဲ သိရ ပခုံးပေါ်က ဘားလေးတွေနဲ.ဆိုတော့ ပိုမြင်သွားတယ်..
ရေကြောင်းလေးက အကြောင်းလေ နှံနှံစပ်စပ် သိရတော့ ကျေးဇူးဗျာ.. ကျွန်တော် ယောက်ဖတော်က သင်္ဘော ၆လတက်ပြီး ငိုယိုပြန်လာတာပဲ…..ဟဟဟဟဟ
ကိုရင်တို.လို သင်းဘောသီး အရင့်အမာကြီးတွေ မျိုးစေ့ချမှ အသီးလှတော့မယ် ဘ၀တွေပေါ့နော…..
Automation Control သင်္ဘောတွေပေါ်လာသလို
Manual Control သင်္ဘောတွေလဲရှိတုန်းပါ
သင်္ဘောပေါ်မှာ မျက်စိလည်လမ်းမှားလို့ အနုပညာသမား အပြစ်မရှိပါ
သင်္ဘောသားကို နုတ်စ်တွေရေးပြီး သီချင်းတွေရေးခိုင်းရင်ရောအဆင်ပြေပါ့မလား
မှတ်ချက်။ ကျွန်တော် သင်္ဘောသားလည်းမဟုတ်၊ သီချင်းလည်းမရေးတတ်ပါ။
ဗဟုသုတများစွာရ၍ ကျေးဇူးပါဗျာ ၊
ကျွန်တော်ကတော့ သင်္ဘောကျင်းမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း
သင်္ဘောသားဖြစ်ဖို့ နီးခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လွဲခဲ့သူပါ ၊
လွမ်းမိုးသီချင်းကတော့ တေးရေးသူ ( စောဘွဲ့မှုး လို့ ထင်ပါတယ် ) ရေးတာကို
ဟာသဆန်ဆန် သဘောမျိုး ဆိုခဲ့တာပါ ၊
ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းရင်းအိမ်မှာ သင်္ဘောသားတစ်ယောက်နေခဲ့ဘူးပါတယ် ၊
အဲဒီသီချင်းထဲကနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ ၊
( ၁၉၈၀ ဝန်းကျင်ပါ ) ပြန်လာရင် မိသားစုတွေ သုံးဖြုန်း ကုန်ခါနီးတော့ သင်္ဘောပြန်တက်နဲ့
ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားကြီးပွားမလာပါဘူး ၊
ဒါပေမယ့် အနည်းစုထဲကသာ အဲသလိုဖြစ်မှာပါ ၊
ကျွန်တော် သိပ် မရင်းနှီးတဲ့ နယ်ပယ် တစ်ခု အကြောင်း..